Umshini onzima we-Shaft Induction wenqubo yokuqinisa insimbi
Ikhaya / Izicelo / Ukukhishwa Kwesivinini / umshini wokwenza lukhuni kushaft
Categories: Ukukhishwa Kwesivinini, Umshini Wokukhwabanisa Ukukhishwa Tags: thenga umshini wokuqinisa we-induction, ukuqina kokungeniswa, umshini wokuqina wokufakelwa, intengo yomshini wokuqinisa, ukuqina kwe-shaft ye-induction, ukuqina kokuqina kobuso, shaft umshini lukhuni, inqubo yokuqinisa shaft, ukuqina kwe-shaft induction, umshini wokwenza lukhuni kushaft, shaft induction lukhuni uhlelo, shaft lokungeniswa heater
Umshini Wokwenza I-High Frequency Shaft Induction Hardening
Ukuqeda ukuqina isetshenziselwa ikakhulukazi ukuqina / ukucisha izindawo ezithwele kanye nemiphini kanye nezingxenye eziyinkimbinkimbi lapho kuphela indawo ethile idinga ukufudunyezwa.
Ngokukhetha imvamisa yokusebenza ye ukufakwa kokushisa uhlelo, kuchazwa ukujula kokungena.
Ngokwengeziwe, kunganqunywa ukuthi ngabe le ndawo izokwenziwa lukhuni emoyeni, ngamanzi noma nge-emulsion ekhethekile yokuqina. Ngokuya ngohlobo lokupholisa, kutholakala amazinga ahlukene obulukhuni.
Ukuqina kwe-Shaft Induction kungabonakala njengesixazululo semanuwali noma esizenzakalelayo. Kukhona futhi nokwenzeka kokuqina enkambisweni eqhubekayo.
Ifanele ukuqina nokushisa imisebenzi ehlukahlukene yokusebenza, njengokuqina kwe-shafts, amagiya, ujantshi womhlahlandlela, ama-disc, izikhonkwane nezinye izingxenye;
Inemisebenzi yokuqina okuqhubekayo, ukuqina ngasikhathi sinye, ukuqina okuqhubekayo okuhlukanisiwe, nokuqina okwenziwe ngasikhathi sinye;
Sebenzisa uhlelo lokulawulwa kwezinombolo noma i-PLC kanye nohlelo lokulawula isivinini semvamisa ukubona indawo yokusebenza nokuskena, bese uxhuma i-PLC namandla okushisa wokufaka ukuze ubone ukukhiqizwa okuzenzakalelayo ngokuphelele.
Kuqondile (ukuqina kwezingxenye ze-shaft) + okuvundlile (ukuqina kwezingxenye zeringi yamagiye)
Ukuqina kungenye ye Ukushisa kokungeniswa kwe-HLQ izindawo ezisetshenziswa kakhulu zezinhlelo zamandla. Amakhulu ezixazululo zethu eziqinisayo ayasebenza emhlabeni jikelele — eziningi zazo zisembonini yezimoto.
Inzuzo enkulu yokufudumeza kokungeniswa kokuqina ukuthi kuthatha imizuzwana embalwa nje. Esithandweni somlilo, inqubo efanayo ingathatha amahora noma izinsuku. Kungenzeka kanjani lokho?
Impendulo ukuthi ukwenziwa kuyamangalisa ekukhiqizeni ukushisa ngokushesha. Lokhu, futhi, kusho ukuthi ungahlanganisa ukuqina enqubeni yokukhiqiza. Ukuqina esithandweni somlilo, ngakolunye uhlangothi, kudla isikhathi esiningi (ukulahleka okukhulu kokushisa) futhi kudinga ukuhambisa izingxenye noma esithandweni sakho noma kusonkontileka omncane.
Ukuhlanganiswa kwe-inthanethi kokuqina kunciphisa izikhathi zakho zokuhola kakhulu.
Ulawula ngokugcwele ikhwalithi, izikhathi zokulethwa nezindleko. Akunasidingo sokuhambisa amakhilogremu wezinto emuva naphambili, okusindisa amandla nezemvelo, futhi okokugcina, wehlisa inani lokuphatha libe ubuncane.
Izinhlelo ze-HLQ Induction Heating Power Systems zineminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho ekuqiniseni nasekuvuseleleni imisebenzi ehlukahlukene. Enhliziyweni yohlelo ngalunye lwe-Hardening yi-HLQ Induction Heating Power Systems Induction Heat Power Source, isiguquli semvamisa se-induction esithuthuke kakhulu embonini. Lezi zinguquko ezihlonishwayo zisiza ukuqinisekisa imiphumela emihle yokuqina — usuku nosuku, unyaka nonyaka
The umshini wokuqina wokufakelwa kufaka phakathi ukuskena okuqondile, ukuskena okuvundlile (okuyisikhungo) nemishini eyenziwe ngezifiso — kanye nemithombo yamandla wokungenisa enxephezelanayo kanye / noma ngokulingana ngamandla amaningi wokukhipha nobuningi.
Leli thuluzi lomshini wokwenza uchungechunge lisebenzisa ubuchwepheshe bokulawulwa kwezinombolo, lunemisebenzi eqhubekayo, yesikhathi esifanayo, eqhubekayo futhi ehlukaniseka kancane, isetshenziselwa ikakhulukazi ukucisha imishayo, amadiski, izikhonkwane namagiya, futhi okuvezwe ngokunemba okuphezulu kokuqeda. ithuluzi lomshini onzima elisetshenziswa ngokuxhuma nobuningi obuphakathi, imvamisa ye-superaudio, imvamisa ephezulu nomshini wokushisa wokungenisa we-ultrahigh.
Ithuluzi le-CNC lokuqeda / ukuqina ithuluzi lomshini:
Uhlelo lwe-CNC: Umshini wokucisha imvamisa ephezulu we-CNC ungahlanganisa futhi ugcine izinhlelo ezahlukahlukene zokucima inqubo ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zomsebenzi.
I-HMI: uhlobo lohlelo nokuboniswa komshini womuntu ngesiNgisi nangesiShayina.
Isilawuli sokulungisa: ingalawula amandla okushisa ukuqala, ukumisa, ukushisa izingxenye kanye nesikhathi sokupholisa, isivinini sokujikeleza nesivinini sokuhamba.
Lathe: zamukela isakhiwo esishiselwe ngemisebenzi emihle yokugqwala.
Izingxenye eziphezulu zokulungiswa: zamukela ukulungiswa kagesi, ukubona ukunqwabelana kobude obuhlukile bomsebenzi.
Uhlelo lwethebula lomsebenzi: sebenzisa ibhola isikulufa ne-servo motor ukushayela, ukukhanya kokushayela, ukucacisa okuphezulu komhlahlandlela nokuma okunembile.
Main kushaft ukujikeleza uhlelo: zamukele variable imvamisa elawula ukubona izingxenye isivinini ngokushintshana okuqhubekayo kushintshwe.
Ingxenye yokulawula kagesi: ithuluzi lomshini linomsebenzi wokuvikela amandla, linokuphepha okuphezulu nokuthembeka.
Uzimele: owenziwe ngopuleti bensimbi obukhulu, obunamafasitela neminyango eslayida, kuvimbela ukubhoboka kwamanzi, kulula ukulayisha izingxenye nokuqapha inqubo yokuqina.
Ithuluzi lomshini wokuqinisa / wokucisha we-CNC omile
Ngokuya ngokuhlukile kokwenziwa komsebenzi, kukhona uhlobo oluqondile, uhlobo oluvundlile,uhlobo oluvaliwe, uhlobo olwenziwe ngokwezifiso, njll.
1.Standard SK-500 / 1000/1200 / 1500 workpiece uhlobo ezihambayo Ukuze imiphini, akwazi ukugcina, izikhonkwane kanye amagiya lukhuni
2.SK-2000 / 2500/3000/4000 Transformer ehambayo uhlobo, Isetshenziselwa ukushisa ubude obungaphezu kuka-1500mm shaft
Uhlobo oluvaliwe: olwenzelwe i-shaft enkulu, indawo yokusebenza engaphezulu ehlanzekile.
Ithuluzi lomshini wokuqinisa i-4.Horizontal
I-SK-500/1000/1200/1500/2000/2500/3000/4000 Isetshenziselwa shaft bushelelezi
Uhlobo olwenziwe ngokwezifiso
Ubude bokushisa obukhulu （mm） 500 1000 1200 1500
Ubukhulu bokushisa obukhulu （mm） 500 500 600 600
Ubuningi bokubamba ubude （mm） 600 1100 1300 1600
Max isisindo workpiece （kg） 100 100 100 100
Isivinini sokusebenzela sokusebenza （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
isivinini sokusebenza sokuhamba （mm / min） 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
Indlela yokupholisa Ukupholisa i-Hydrojet Ukupholisa i-Hydrojet Ukupholisa i-Hydrojet Ukupholisa i-Hydrojet
voltage Input 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz
Ubukhulu LxWxH (mm) 1600 x800 x2000 1600 x800 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3200
isisindo （kg） 800 900 1100 1200
Ubude bokushisa obukhulu （mm） 2000 2500 3000 4000
Ubukhulu bokushisa obukhulu （mm） 600 600 600 600
Ubuningi bokubamba ubude （mm） 2000 2500 3000 4000
Max isisindo workpiece （kg） 800 1000 1200 1500
isivinini sokusebenza sokujikeleza （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
Ubukhulu LxWxH (mm) 1900 x900 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3400 1900 x900 x4300
isisindo （kg） 1200 1300 1400 1500
Ithuluzi lamathuluzi wokuqinisa umshini we-CNC shaft:
Uhlelo lwe-1.CNC: Umshini wokuqinisa umshini we-high-frequency umshini we-CNC ungahlanganisa futhi ugcine izinhlelo ezahlukahlukene zokucima inqubo ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zomsebenzi.
I-2.HMI: uhlobo lohlelo nokubonisa komshini womuntu ngesiNgisi nangesiShayina.
Ukulungiswa kwe-3.Control: ingalawula amandla okushisa ukuqala, ukuma, ukushisa izingxenye nesikhathi sokupholisa, isivinini sokujikeleza nesivinini sokuhamba.
4.Lathe: zamukele isakhiwo ashiselwe ngemisebe emihle yokugqwala.
5.Top ukulungiswa izingxenye: zamukele ukulungiswa kagesi, ukuze uqaphele clamping ezahlukene ubude umsebenzi ucezu.
Uhlelo lwethebula le-6.Work: sebenzisa i-ball screw ne-servo motor ukushayela, ukukhanya kokushayela, ukucacisa okuphezulu komhlahlandlela nokuma okunembile.
Uhlelo lwe-7.Main shaft rotation: sebenzisa imvamisa eguquguqukayo elawula ukubona isivinini sezingxenye zokujikeleza silungiswa ngokuqhubekayo.
Ingxenye ye-8.Electric control: ithuluzi lomshini linomsebenzi wokuvikela amandla, linokuphepha okuphezulu nokuthembeka.
9.Frame: esenziwe uqweqwe lwensimbi amapuleti, ngewindi kanye beya iminyango, ukuvimbela amanzi chaphaza, kulula ukulayisha izingxenye kanye qapha ukuqina kokungeniswa inqubo.
Induction Surface Hardening Machine Amathuluzi